2021 ရဲ့ Latest & Greatest ဖုန်းများ
Aung Myo Hein5Mar, 2021
Smart Phone လောကကြီးက ဒီဘက်နှောင်းပိုင်းမှာ တော်တော်လေးကို ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်လာပါတယ်။အရင်တုန်းက Gaming ဖုန်းဆို Razor တစ်ခုလောက်ပဲ လောက်လောက်လားလား ရှိခဲ့ရာကနေ အခုဆို IQOO တို့ One plus ရဲ့ Cyberpunk Edition တို့ Nubia အပြင် Xiaomi Black Shark တွေပါ အပြိုင်အဆိုင်ထွက်လာတာပါ။
ဒီနှစ်မှာရော ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ Latest Technology တွေကို ကျွန်တော်တို့ Smartphone တွေနဲ့အတူ ခံစားရမလဲ ?
IQOO ဆိုတာ Vivo ရဲ့ sub brand တစ်ခုဖြစ်ပြီး Gaming Phone တွေကို အဓိကထုတ်လုပ်ပါတယ်။ Gaming Phone ဆိုတာထက် Performance အသားပေးဖုန်းတွေဆို ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ Spec အသေးစိတ်ကို မသိရသေးပေမယ့် 4400mAh batery နဲ့ 66W Charging တို့ပါလာမယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ Soc အနေနဲ့ Snapdragon 870, UFS 3.1 storage , 120Hz တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Nubia ရဲ့ Red Magic Series က Smartphone Game လောကမှာ ဆရာကြီးတစ်ဆူဖြစ်နေတာ ထွက်ခါစတည်းကပါ။နောက်ဆုံးထွက်လာတာကတော့ Red Magic6နဲ့6Pro ပါ။ ဘာတွေဘယ်လို ကြမ်းလာလဲဆိုတာ တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ကျမယ်။
Pro မှာပါလာမှာတွေက 120W Fast Charge 18GB Ram ,512 GB Storage ပါမယ်။ကျန်တာတွေကတော့ 6နဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဒီဖုန်းနှစ်လုံးစလုံးက 165Hz ပါလာမယ့် ပထမဆုံး ဖုန်းညီနှောင်နှစ်ကောင်ပါ။ CPU က နောက်ဆုံးပေါ် flagship chip snap dragon 888နဲ့လာပါမယ်။
ဘေးကနေ ပါနေကြဖြစ်တဲ့ shoulder triggers လေးတွေလည်းပါမယ်။ Game ဆော့ရင်း heat တက်တာတွေလျော့ဖို့ cooling system လည်းပါပြီးသားဆိုတော့ ဘာကောင်းမလဲ။
Game ဆော့ဖို့တော့ ရှယ်ကောင်းဦးမှာပါ။
Snapdragon 888 ကိုသုံးထားတဲ့ နောက်ထပ် Flagship တစ်လုံးပါ။ တစ်ခုရှိတာက 3.5 mm jack ပါလာပါသေးတယ်။(flagship ထဲမှာပါတာ ဒီကောင်ပဲရှိတယ်) 6.43” super amoled screen ကိုမှ 120Hz Full HD+ နဲ့ပါ။ Battery အနေနဲ့ 4500mAh ကို 65W Fast Charge ပါပါတယ်။
အမှန်တိုင်းပြောရရင် Oppo နဲ့ Vivo တို့က တော်တော်လေး Innovated ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုသွင်းတဲ့ ဖုန်းတွေမပါပါဘူး။ ဒီအထဲမှာက ကျွန်တော် သဘောအကျဆုံးက ဒီ Find X Series ပါ။ Find X2 Pro တုန်းက 1Billion Colours အထိရတဲ့ Amoled Display ပါတယ်။ဒီကောင်မှာရော ဘာတွေပါလာလဲ? DCI-P3 Colour တွေကိုအနီးစပ်ဆုံး ရောက်အောင်ပြန်ထုတ်လွတ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ 10 Bit အထိ Colours တွေပါလာပါမယ်။ စာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ 1.07 Billion Colours တွေပေါ့။ ကျန်တဲ့အချက်အလက်တွေကတော့ မသိရသေးပါဘူး။
Meizu 18 & 18pro
Meizu ကလည်း နာမည်တစ်လုံးနဲ့ နေတဲ့ Brand တစ်ခုပါပဲ။အခုထိ သူ့ရဲ့အမာခံဖန်တွေ ရှိနေဆဲပါ။
နှစ်ကောင်လုံးမှာ snapdragon 888 နဲ့ (another snapdragon ?) Ram အနေနဲ့ 12GB အထိရရှိနိုင်ပြီး LPDDR5 ပါ။ Storage ကတော့ UFS 3.1 512GB အထိရနိုင်ပါတယ်။
Camera အနေနဲ့ Sony ရဲ့ IMX 616 Sensor ကိုသုံးလာမယ်လို့ ယူဆရပြီး Battery ပိုင်းအနေနဲ့ 44W Fast Charging နဲ့ 18W Wireless Charging တွေပါလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Wai Yan Kyaw 13 Jun, 2021
Programming,web developmentအတွက် နာမည်ကြီး Youtube Channelများ
Aung Myo Hein 11 Jun, 2021